Tallaabada ugu horreysa waa la qaatay, waayo, abuuritaanka shirkado ee ugu weyn dalka Turkiga ayaa tareenka | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercityTallaabada ugu horreysa la qaatay ee aasaaska shirkadda ugu wayn dalka Turkiga ee tareenka
Tallaabada ugu horreysa la qaatay ee aasaaska shirkadda ugu wayn dalka Turkiga ee tareenka
21 / 04 / 2013 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD
Golaha Guud ee Barlamaanka, "sharciga aasaasiga ah" sida Koowaad ee Qabyada wada hadleen Turkey ee Law on Xorreynta waaxda gaadiidka Tareenka ee lagu aqbalay. Law, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd talaabada ugu horeysa ee aasaaska shirkadda ugu wayn dalka Turkiga ee tareenka
Golaha Guud ee Barlamaanka, "sharciga aasaasiga ah" sida Koowaad ee Qabyada wada hadleen Turkey ee Law on Xorreynta waaxda gaadiidka Tareenka ee lagu aqbalay. Sida ku xusan qodobka 9 ee la ansixiyay, TCDD waxay u dhaqmi doontaa sidii kaabayaasha kaabayaasha tareenka ee qeyb ka mid ah kaabayaasha wadooyinka ee ay dowladdu leedahay, kuwaas oo qeyb ka ah shabakadaha kaabayaasha tareenka ee qaranka. TCDD; Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta ayaa saadaalin doonta maalgashiga lagama maarmaanka u ah maalgashiga kaabayaasha tareenka ee xawaaraha sare iyo gaadiidka tareenka xawaaraha sare, maalgashiga loogu beddelayo khadadka laba-ama xariiqyo badan iyo cusbooneysiinta iyo hagaajinta kaabayaasha tareenka. Haddii ay dhacdo dhismaha khadka isku xirka; Aaladda lama-huraanka ah ee loo baahan yahay khadka isgoyska si loo dhiso waxaa ku dallici doona TCDD ka dib marka la ururiyo khidmadda la-wareegidda iyo xaq u yeelashada fududeynta ayaa loo dejin doonaa iyada oo la door bidaayo codsadehu inuusan dhaafin sannadka 49. Dhamaadka nolosheeda waxtarka leh, dhammaan hantida lagu dhisay guryahaas waxaa loo qaadan doonaa inay lahaan doonaan TCDD iyada oo aan la sii ambaqaadin. TCDD ma bixin doonto wax magdhow ah ama magdhaw ah ma bixin doonto hantidaan. Hay'adaha sharciga dadweynaha iyo shirkadaha; Wasaaradda ayaa u idman doonta inay dhisto kaabayaasheeda tareenka, si ay uga mid noqoto hawlwadeennada kaabayaasha tareenka ee kaabayashaas, iyo inay ahaato mid ka shaqeysa tareenka tareenka ee shabakadda kaabayaasha tareenka ee qaranka.
- Guryaha hantida maguurtada ah waxaa lagu wareegi doonaa Wasaaradda.
Haddii ay dhacdo in shirkadaha ay dhistaan ​​kaabayaasha tareenka; Guryaha aan la noolaan karin ee ay u baahan tahay kaabayaasha tareenka waxaa laga soo qaadi doonaa shirkadda la xiriirta waxaana iska leh Wasaaradda waxaana xaq u yeelashada sahlan waxaa loo dejin doonaa iyada oo loo danaynayo shirkadda ujeeddada la cayimay in aan ka badneyn sannadka 49. Dhamaadka nolosheeda waxtarka leh, dhammaan hantida laga dhisay waxyaalaha lama-hurayaasha ah waxaa loo wareejin doonaa lahaanshaha khasnadda iyada oo aan la sii marin hanaan dheeraad ah. Hantidhowrka kama bixin doono wax magdhow ah ama magdhaw ah hantidan. Hanti Dhowrka hantida gaarka loo leeyahay oo loo qoondeeyay ama looga tegay si loogu isticmaalo TCDD'ye oo ay oggolaatay Wasaaradda Maaliyadda, qaab dhismeedka iyo tas-hiilaadka ku yaal TCDD'in si loogu isticmaalo howlaha iyo nashaadyada waxaa loo gudbin karaa TCDD. Marka laga reebo kaymaha; Hantida qaran ee lama-taabtaanka ah waxaa loo isticmaalaa waajibaadka iyo howlaha TCDD, kuwa loo arko inay ku habboon yihiin Wasaaradda Maaliyadda waxaa loo gudbin karaa TCDD iyada oo lala wado dhismayaasha iyo tas-hiilaadka ku yaal ka dib markii ay iska diiwaangeliso magaca Wasaaradda Maaliyadda. Waxyaabaha aan la isticmaali karin ee ka dhex jira baaxadda nidaamkan, kuwa loo qoondeeyay Wasaaradda Difaaca Qaranka iyo agabkii Ciidanka Qalabka Sida ee Turkiga iyo kuwa si wada jir ah loogu adeegsaday TCDD waa laga saari doonaa. Waxyaabaha aan la arki karin ee loo diiwaan geliyo loona qoondeeyo magaca 'TCDD' cinwaanka cinwaanka, sababtuna tahay adeegsiga qaanuunkan ilaa taariikhda galitaanka la dhaqan galayo, oo ku urursan magaca 'TCDD ecrimisil' wali lama ururin doono, iyadoo aan loo eegeynin heerka loo daayo. Lacagta khidmadda ah ee 'ecrimisil' laguma soo celin doono. Kuwa ka kiraystay TCDD qaybaha seddexaad ee hantida lama taabtaanka ah, ee ku ururay magaca kireystayaasha sababta loo isticmaalay qodobkaan ilaa taariikhda galitaanka kuwa aan weli soo uruurin ajuurada ijaarka waxaa laga daynayaa shuruudo kasta oo la bixiyo taas oo ah in TCDD. Baqaarka ku xeeran kaabayaasha tareenka, masaafada u dhow dhismaha ee Wasaaradda ay go'aamisay in la hubiyo in nabadgelyada tareenka la raaco. Dhismaha aan ku habooneyn masaafada la cayimay waa la dumin doonaa ama dumin doonaa markii ay weydisato Wasaaradda. Wadada tareenka wadada tareenka, wadada tuulada iyo isgoysyada kale ee laamiga ah waxaa loo qaddarin doonaa sida tareenka ugu weyn uu noqon doono qaanuunka gawaarida tareenka. Isgoysyadaas, hay'adda ama ururka loo dhisayo wadada cusub waxaa waajib ku ah inay ka gudubto ama gudubto oo ay qaado tallaabooyin kale oo badbaado ah. Xaaladaha wadooyinka tareenka ee loo baahan yahay isgoysyada heerka ee xaaladaha halka caqabad ku ah xarumaha laga saari doono.
- “Ragyahow waxaad ku ciyaareysaan dab?”
Kuxigeenka MHP Kocaeli Lütfü Türkkan ayaa sagxadda taagay oo yidhi, "Ma waxaad ka saari doontaa muujinta TC wadooyinka tareenka hortiisa?". 2149 ayaa u gudbiyey in la PKK Turkey ayaa sheegtay Türkkan, "laakiin ma ogaan dhinacaas dhinac ah oo dab lagu ciyaaro marka shiday daqiiqado. Dadyahow waxaad ku ciyaaraysaan dab. Dadkii caqli lahu waxay yidhaahdaan salmış aad guys yihiin aan xitaa suuqa, waxay ka hadlaan sida ay u kala qaybin lahaa Turkey, "ayuu yidhi. Ku-xigeenka CHP Balikesir Haluk Ahmet Gumus, ku xigeenada xisbiga AK Party ayaa sheegtey in aysan garaneyn waxa furitaanka. Gaadiidka, Wasiirka Arrimaha iyo Communications Maritime Binali Yildirim, ay jawaab u su'aalo ka xildhibaan ee qaybta koowaad ee biilka, inch kasta oo dalka ka mid ah dalka Turkiga, ayaa sheegay in dalka this furan yahay muwaadin kasta. Yıldırım wuxuu yidhi, meel walba waan tagayaa qof walbana waa inuu aadaa. Haddii aanaan meelaha qaar tegi karin 'waad ku fadhiisanaysaa, halkan fadhiiso, calankayagu ma dhihi karo'. Marka hore waanu tegi doonnaa, muwaaddinku wuu ina xannaanayn doonaa, way bixi doonaan, ayuu yidhi. Ka dib markii la ansaxiyay qodobka 9 qeybta koowaad ee sharciga, Afhayeenka Barlamaanka Mehmet Sağlam ayaa xiray kulanka iyadoo leh ajende gaar ah 23 Talaadada Talaadada ee 14.00.
Turkey ayaa laga soo galo sida TÜVASAŞ 500 Industrial Enterprises
Turkey ayaa Kardemir 23. Ururka Shaqaalaha
Si aad uga mid noqotid shirkadda warshadaha ee 20 ee KARDEMİR
Maanta Taariikhda: Agoosto 17, 1869 Hirsch waxay qaadataa meel cusub oo lagu beddelo Porthole…
Maanta taariikhda: 17 August 1869 Hirsch waa hogaamiyaha Porthole ...
300 Million euro amaah mashaariicda mitrooga oo ay qaadeen shirkadda Turkiga ee Ukraine
Tallaabada koowaad ee waddada tareenka ee Ruushku hoggaaminayo ee Eurasia
Foundation Foundation TCDD Raytur Waxay bixisaa Fursadaha Safarka Gudaha iyo Dibedda
Tallaabo weyn oo ku taala dekedda magaalada Brugge City
Tallaabada kowaad waxaa loo qaaday mashruuca baabuurta ee Bartin
Talaabada koowaad ee mashruuca wadooyinka
Wasaaradda Badbaadinta iyo Isgaarsiinta
shabakada kaabayaasha waddooyinka tareenada
Ku-xigeenka Kutluata wuxuu la shaqeeyaa shaqaalaha
Mashruuca YHT Ankara-Istanbul ayaa walaac ku abuuray taariikhda furitaanka